”Go’aankani wuxuu xumayn karaa xiriirka labada dal!” – Kenyatta oo digniin & hanjabaad kasoo saaray xukunkii ICJ | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Go’aankani wuxuu xumayn karaa xiriirka labada dal!” – Kenyatta oo digniin &...
”Go’aankani wuxuu xumayn karaa xiriirka labada dal!” – Kenyatta oo digniin & hanjabaad kasoo saaray xukunkii ICJ
(Hadalsame) 21 Okt 2021 – Madaxweynaha waddanka Kenya, ayaa markale gaashaanka u daruuray xukunka Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda oo dhawaan Soomaaliya u xukuntay qeyb badan oo ka mid ah soohdinta badda ay ku mursanaayeen Kenya iyo Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta, ayaa ka digay in go’aankaasi uu waxyeelayn karo xiriirka ka dhaxeeya labada dal, sida ay qortay BBC.
“Cidna kama aqbaleyno in ay sheegato lahaanshiyaha qeyb ka mid ah dhulkeena, sida aan u xushmeyno xuduuddaha dalalka kale ayaan sidoo kale ka filaynaa in xuduuddaheen dhuleed iyo badeed loo xushmeeyo,” ayuu yiri madaxweyne Kenyatta.
Uhuru ayaa dhanka kale xusay in Kenya ay tahay dal nabadda jecel isla markaana ay dooneysa in nabad ay kula noolaato dalalka dariska ah ayna ka qeyb qaadatay howlaha nabadda loogu raadinayo dalalka kale.
Previous article5 jawaabood oo kasoo noqday hadal uu Muuse Biixi ka yiri dadkii laga soo tarxiilay Laascaanood & hal arrin oo ay fahamdarro ka jirto
Next articleDAAWO: ”War nacasyohow gaariga jooji!” – Gaari wayn oo muddo hoosta ku watey gaari baasi rabey (Hal khalad oo uu gaariga yari sameeyey ka faa’iidayso)